Brain na Obi nke National Electric Train Trust to ASELSAN | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyMpaghara Marmara54 SakaryaNdi Brain na Obi nke National Electric Train ka enyere n’aka ASELSAN
18 / 02 / 2020 54 Sakarya, ụgbọ okporo ígwè, General, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, agbachitere, Turkey
nyefere ụbụrụ na obi nke ụgbọ ala eletrik ahụ dị ka aselsana
Site na mmemme itinye ego nke 2020, a ga-akwụsị inye ụzọ ụgbọ okporo ígwè dị elu site na mba ọzọ, a ga-emepe ụzọ maka imepụta ụlọ na mba ga - echekwa teknụzụ ụgbọ okporo ígwè na oke ọsọ na ijeri euro maka akụ na ụba.
Ọ mere ịrịba ọganihu maka anụ ụlọ mmepụta nke oké egwu teknụzụ na mba-agbachitere ọrụ dị iche iche na ndi tinyere Turkey, na nkwa site Year 2020 Investment Program na n'ihu emesi. Mkpebi banyere “National Electric Train Set” ngo a gụnyere na mmemme ahụ bụ ezigbo ihe atụ nke uche a. Ihe mmemme a, nke malitere oge ọhụrụ na usoro nke obodo na obodo na usoro njem ụgbọ oloko, ga-aga n'ihu na mpaghara dịka ịkwado ụlọ ọrụ ụlọ, belata ike teknụzụ n'akụkụ ndị achọrọ, belata ịdabere na mba ọzọ, na inweta nnukwu uru akụ na ụba.
Oge ịre ahịa si mba ọzọ gwụ
Na mmemme itinye uchu n’afọ 12, nke edoziri n’usoro dị n’uche ebum n’uche nke iri na otu n’ise ma bipụta ya na akwụkwọ gọọmentị Gazette n’abalị iri abụọ na abụọ n’afọ 2020 na Mkpebi Onye isi ala ahụ, a rụtụrụ aka na a ga-eji ụgbọ ala eletrik na mba ga-eji ụgbọ oloko eletrik arụ ọrụ. Na mmemme akụkụ a kpọtụrụ aha na “Arụzụ inzọ Ọsọ Ọsọ, a ga - ekwupụta okwu ndị a:“ Agaghị ewepụta mba ndị ọzọ dị elu ga - esi na mba ọzọ wee kwupụta ọkwa ọkwa nke 2020, ma ewezuga usoro 12 Train Speed ​​Speed ​​nke usoro ịre ahịa ya na-aga n'ihu. A ga-eji okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè dị elu nke TÜVASAŞ mee ihe na ya. ” Ekwuputakwara na mmemme ahụ na ntinye aka ụlọ ga-abụ ọkwa kachasị elu n'ịzụ ụgbọ na akụrụngwa.
Na mpaghara ahụ, a na-eleba anya na nke a ga - eme ka aka ụlọ ọrụ ụlọ sie ike megide ndị na - egwu ndị mba ọzọ n'ahịa n'ahịa ahụ na ụlọ ọrụ na mba nwere ike iru ihe mgbaru ọsọ ha na ogologo oge n'ime oge dị mkpụmkpụ ma ọ bụrụ na ha esighị n'akụkụ a pụọ.
E nyefere “ụbụrụ” na “obi” ụgbọ oloko ahụ nye ASELSAN
ASELSAN, nke bidoro nyefe ikike ya na teknụzụ nchebe na mpaghara ndị nkịtị, esonyekwara na Nrụọrụ Ọzụzụ eletriki Mba. Turkey n'ụgbọala Industries Inc. soplaya (TÜVASAŞ), dị ka nkwekọrịta ahụ si dị, ASELSAN na-eweta Usoro Nchịkwa na Nchịkwa ingbọ projectlọ ọrụ ahụ.
Sistemụ Njikwa Nchịkwa na Nchịkwa (TKYS), nke a kọwara dị ka "ụbụrụ" nke ụgbọ oloko, bụ isi na-achịkwa ọrụ dị mkpa nke ụgbọ ahụ dịka osooso, aghụghọ (braking), nkwụsị, njikwa ọnụ ụzọ, ndị njem njem na ọkụ, ebe sistemụ nkasi obi ya dị ka ikuku ikuku na ozi njem. na-ejikwa ya. Ejiri kọmputa TKYS mebere ya na ihe eji eme ya ma nwekwaa obi nke ukwuu na ntukwasi obi; eji arụ ụlọ, njikwa, nchekwa na nchekwa ntụkwasị obi, ngwaike na ngwanrọ agbadoro kpamkpam.
A na-etinye usoro ihe akowara dị ka “obi” nke ụgbọ oloko n'ụzọ arụmọrụ ga-enye arụmọrụ arụmọrụ na ngwanrọ mbụ, ngwaike na algọridim.
Nnukwu ọsọ na mmepụta
Site na nyocha nke ahụmịhe ASELSAN na ike ya na ụlọ ọrụ nchekwa n'ụlọ ọrụ National Electric Train Set, a na-echekwa ma ngwa ngwa mmepụta ya na oge. Eziokwu ahụ bụ na ASELSAN na-ewere ọnọdụ na sistemụ bụ "ụbụrụ" na "obi" nke ụgbọ oloko ahụ site na usoro nke onyonyo na-eweta nsonaazụ dị egwu dịka mmezu nke imepụta, nke nwere ike ịdịgide ruo ọtụtụ iri afọ n'okpuru ọnọdụ nkịtị, na afọ 1,5.
€ 6 ijeri uru
Ugbu Turkey dị mkpa si mba ọzọ, 106 nke 12 ụgbọ okporo ígwè tent, mgbe 5 na-zutere site National Electric Train oru ngo. The ikpe nke ndị fọdụrụ 89 ụgbọ okporo ígwè tent na mpaghara na mba ụlọ ọrụ na-emepụta ihe dị 3,5 ijeri euro ga-kọrọ anọgide na Turkey. Ekwuputala na ọnọdụ a ga-enwe ọtụtụ ihe na ụlọ ọrụ na ọnụọgụ ahụ kwuru ga-eru Euro 6 ijeri. Iji nweta uru akụ na ụba a, a na-ekwusi ike ịdị mkpa nke itinye iwu na TÜVASAŞ taa. Nke a na-enye ohere uko usoro oge nile ụgbọ okporo ígwè set na Turkey okosobode oké enweghị ndidi dabere na n'èzí na ite na nwere ike mfe zutere na mpaghara mba owuwu mkpa.
Na-enye nkasi obi dị elu
Ejiri ụgbọ ala eletriki eletriki, nke TÜVASAŞ na-agbago ngwa ngwa site na 160 kilomita kwa elekere ruo 200 kilomita kwa elekere, nwere ahụ aluminom ma bụrụ nke ga-abụ nke mbụ na nke a. Emebere ụgbọ ala 5 nwere atụmatụ nkasi obi dị elu dabere na njem nke etiti. Emebekwara ya iji gboo mkpa dị iche iche nke ndị njem nwere nkwarụ.
isi: Akwụkwọ akụkọ Milliyet
Ụbụrụ nke njem na Istanbul ga-abụ Yenikapı Transfer Center
Bursaray ụbụrụ akara center (Video)
Ụbụrụ nke Metrobus na-aga Edirnekapı
Obi nke ulo oru ugbo na ulo oru mba na Sakarya
Mmepụta nke ụgbọ ala eletriki Mba ọ ga-aga n'ihu na TÜVASAŞ?
Nlekọta Helicopter Ụlọ Nche
Obi Antalya na-eti na Tünektepe
Obi nke njem nleta na Tünektepe
Ọkụ Egwuregwu Mba
njikwa ụgbọ okporo ígwè na njikwa usoro